သင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တက်ရောက်ရန်ရရှိပါသည်ကိုးယေဘုယျ EDINBURGH ကလပ်ညဖို့လတ်ဆတ်တဲ့လမ်းညွှန် - သတင်း
သင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တက်ရောက်ရန်ရရှိပါသည်ကိုးယေဘုယျ Edinburgh ကလပ်ညဖို့လတ်ဆတ်တဲ့လမ်းညွှန်
ယုံချင်ယုံမယုံရင်အက်ဒ်ဘာ့ဂ်မြို့မှလတ်ဆတ်သောလှိုင်းလုံးကြီးကမြို့တော်ကိုတိုက်ခတ်ပြီး uni ဘ ၀ ကိုစကတည်းကတစ်လနီးပါးကြာသည်။ ဤအချိန်တွင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုသို့ကျရောက်သွားပြီးသင်သိသောအရာကိုစွဲကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်မြို့တစ်မြို့လုံးသည်ထိုညတွင်စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်လှေခါးထစ်ကိုရှာဖွေရန် (သို့မဟုတ်သင်၏လှေကိုမည်သို့မည်ပုံမျောပါစေ D&B သို့ဉာဏ်မဲ့စွာခေါင်းငုံ့ထားရန်) ထွက်လာသည်။
ဤတွင်အက်ဒ်ဘာ့ဂ်အသင်း (၉) ခုပါ ၀ င်ပြီးလတ်ဆတ်သူအားလုံးသည်အနည်းဆုံး Apple နှင့် Mango VK များကိုအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်။ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: သင်သည်သူတို့၏တဝက်၏အနံ့နှင့်အညစျအကွေးသည်းခံဖို့လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်း gazebo-ed ဖြစ်ရပါမည်။
၁။ Juju Club - Eastside၊ George Street
အကောင်းအဆိုးများ - လတ်ဆတ်တဲ့သူတွေကြားမှာရေပန်းစားပြီးအချိုရည်တွေကအရမ်းစျေးပေါတယ်။ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ငါးနှစ်သားကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေတဲ့ inflatables တွေကိုကစားပါ။
Cons: ဒါဟာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း Pollock ပါ ၀ င်ပြီးတန်းစီမှုအတော်အတန်ပါ ၀ င်ပါတယ်။ Pollock မိန်းကလေး၏ပန်းရောင်ကတ္တီပါမီးတောက်ပေါ်သို့အစဉ်အမြဲလမ်းပေါ်တွင်အစားအစာများဖြန့်ဖြူးနေသောဆင်းရဲသောသူအတွက်တိတ်ဆိတ်စွာနေသည့်အချိန်လေး - ထိုမိန်းကလေးများသည်မည်သို့တိုက်ခိုက်ရမည်ကိုသိကြသည်။
ဝတ်ဆင်: မီးတောက်များ, headbands တစ် Depop ထိပ်တန်း, နှင့်တန်းစီဘို့သင့် North Face သို့မဟုတ်ကနေဒါ Goose မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ သူတို့တစ်တွေSchöffelမဝတ်လျှင်, စွပ်စွဲချက်, ယောက်ျားတွေဝင်ကြဘူး။
စုစည်းရန်သီချင်း: ပန်းများ (Sunship Edit)
2. အုံ - Niddry လမ်း
အကောင်းအဆိုး: မှတ်ချက်မရှိ။ ရာသီမရွေးရေခဲစကိတ်စီးသည့်နေရာတစ်ခုကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါကအမျိုးသမီးများအားလန်းဆန်းတက်ကြွသောအားကစားသမားများအားထုတ်လွှင့်သည့် Chun မှတဆင့်လျှောစီး။ သွားကြည့်ပါ။
Cons: အနံ့။ လူများ။ ချွေး နေမကောင်းလိုအနံ့
၀ တ်ဆင်ပါ။ နံနက်ခင်းမှာသင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့အရာ။ ဒါမှမဟုတ်ခုနစ်ကြိမ်အတန်းဆေးကြောပါ။
စုစည်းရန်သီချင်း: Come On Eileen - Dexy's Midnight Runners
အကောင်းအဆိုး - Dutti bass တညလုံးတညလုံး တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်။
Cons: ဘေ့စ်ပရိတ်သတ်အတုတွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ် ၎င်းသည်အလွန်ပူပြင်းပြီးချွေးထွက်စေသည်။ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့ - သင်ကလူနှစ် ဦး ခန့်အတွက်သင့်တော်သောဆေးလိပ်သောက်သည့်နေရာ၌အေးနိုင်သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး။
Wear: Air Force 1s နှင့် rave shades နှင့်တွဲဖက်ထားသည့် Head-to-toe စပျစ်သီးပြွတ် Adidas၊ Palace နှင့် Champion တို့ကိုစဉ်းစားပါ။ ပုံးတစ်ပုံး ဦး optional ကို။ သင်၏နေအိမ်ကောင်တီများမှမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမည်သူမျှသိလိမ့်မည်မဟုတ် - ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။
စုစည်းရန်သီချင်း: ပြProbleနာမရှိ - Chase & Status
၄။ မဟုတ်ပါ - ဂျော့ခ်ျလမ်း
ကောင်းကျိုးများ - ကလပ်ဓာတ်ပုံဟာအသက်ရှူခြင်းဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Facebook DP အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုလျှင်၊ ဤနေရာသည်ဤနေရာဖြစ်သည်။ ဒီတီးလုံးတွေကတုန်ခါနေပြီးတကယ်မှာသီချင်းစာသားများရှိသည်။ DnB ကူးစက်ခံရတဲ့ Cowgate ရဲ့အနက်ဆုံးသောနေရာမှအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအပိုဆုကြေးတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဆေးလိပ်သောက်သည့်နေရာသည်ကလပ်ဓါတ်ပုံများထက်ပင် ပို၍ သင့်တော်သည်။
Cons: ဒါဟာ sexy club နဲ့ spenny အချိုရည်စျေးနှုန်းတွေလာတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုမိုဆိုးရွားလာအောင်ပြောရရင်ဈေးသက်သာတဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့အတူ LED Belvedere ပုလင်း ၀ ယ်တဲ့ arseholes တွေဟာဒီပိုက်ဆံတွေကိုဖြုန်းတီးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာတာပါ။
Absolute ဒဏ္endsာရီ။ မဟုတ်ပါ။
Wear: ဤနေရာတွင် ၀ တ်စုံသည်သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုမူတည်သည်။ ဒေသခံများသည်အတော်အတန် ၀ တ်စားဆင်ယင်တတ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများသည်အဓိကကျသည့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ထိပ်တန်း Vibe ကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
Song of it: I Gotta Feeling - Black Eyed Peas
5. သူလျှို - Cowgate
Con: ဟော်ကီကစားရမယ် ထဖွင့်သူမဆိုဟော်ကီကစားသမားတစ် ဦး လိုလားသူ Brexit Trump ထောက်ခံသူမှထပ်တူထပ်မျှကုသပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဟော်ကီကစားသူများသည် GossipGuy ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
ရာသီ6ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာလက်ထပ်ခဲ့သည်
Wear: သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး - VK ရဲ့ညအကုန်လုံးမှာညလုံးပေါက်ကွဲသွားမယ်။
သီချင်း - အိမ်ပြန်တိုင်းပြည်လမ်းများ - John Denver
၆။ ဒိန်ခဲကြီး - Potterrow
Pros: ပကတိဂန္ထဝင်။ လတ်ဆတ်သောရက်သတ္တပတ်၏ပထမညမှ ၄ နှစ်အထိ၊ Big Cheese သည်သင့်နောက်ကျောကိုအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။
Cons: အဲဒီမှာလုပ်နေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့နယ်မြေပိုင်နက်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကြီးမားသောဒိန်ခဲသည်ကလပ်အသင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတဆေးကိုကူးစက်စေသည့်နာကြည်းဖွယ်စကားလုံးနှင့်တူသည်။
၀ တ်စုံ - အ ၀ တ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခြင်း - သင်သည်ရောမတိုဂါမှတီတယ်ဘီဘီဝတ်စုံများအထိသိုလှောင်ထားသောအိတ်အထိမည်သည့်အရာကိုမဆိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည် - သင်၏အသင်းသို့မဟုတ်ကလပ်သည်မည်မျှထူးဆန်းသည်ကိုမူတည်သည်။
စုစည်းရန်သီချင်း: ကြယ်များအတွက်တက်ပါ - S ကလပ် ၇
၇။ Rascals - Bourbon, ဖရက်ဒရစ်လမ်း
အကောင်းဘက် - Rascals ကလပ်အသင်းဟာ Edinburgh မှာအသင့်တော်ဆုံးပါ။ အနည်းဆုံးခုနစ်ခုဆွဲရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ထိုသို့သွားပါ။
Cons: ကလပ်တွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူများနှင့်အတူရှိနေခြင်းသည်သင်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအတွက်ဘာမျှမလုပ်ပါ။
၀ တ်စုံ - မိန်းကလေးများသည်အက်ဒ်ဘာ့ဂ်တွင်တွေ့ဖူးသမျှသောချောမောဖွယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနှင့်ရူးသွပ်နေဟန်ရှိသည်။ ဒီမှာအထင်ကြီးရန်ဝတ်စားဆင်ယင်။
သီချင်း - Drake single များ၊ Drake ထူးခြားချက်များနှင့် Drake album သီချင်းများ။
၈။ Garibaldi's - Hanover လမ်း
အကောင်းအဆိုးများ - လူတိုင်းနှင့်မည်သူမဆိုညဥ့်နက်သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင်အဆုံးသတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကလပ်အသင်းများ၊ ရ ၀ မ်းများ၊ ထောင့်တစ် Stripper ရဲ့တိုင်လည်းရှိပါတယ်။ မပြောပါနှင့်။
Cons: တစ်စက္ကန့်ကသေပြီအနည်းငယ်လူဟောင်းများပါဝင်သည်, နောက်တစ်နေ့က 15 မိနစ်တန်းစီနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်။ အချိုရည်စျေးနှုန်းများသည်အခမဲ့ ၀ င်ခွင့်အတွက်ငွေညှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးမည်သူသည်ဂါဇာ၌အထူးဖြစ်သနည်း။
၀ တ်ဆင်ပါ - သင်ကဲ့သို့လာပါ၊ သို့သော်အနက်ရောင်လည်စည်းအဖြစ်အပျက်များမှလာသည့်မိန်းကလေးများသည်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မှပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သင့်သည်မှာ အကယ်၍ သူတို့ကခြေချောင်းမတက်ချင်ပါက
သီချင်း - မင်းကိုလှပစေတဲ့အရာ - One Direction အဖွဲ့
၉ ။ Creme Soda - လူလူ၊ ဂျော့ခ်ျလမ်း
အကောင်းအဆိုး - ရပ်ဘီလူငယ်များတက်ရောက်ကြသည်။
Cons: ရပ်ဘီယောက်ျားလေးများတက်ရောက်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ကုတ်အင်္ကျီအကျိတ်များကိုပွတ်တိုက်ခြင်းမှကော်ဇောမီးလောင်ဒဏ်ရာများရှိသောကလပ်ကိုသင်ထားခဲ့ပါလိမ့်မည်။
၀ တ်စုံ - ယောက်ျားလေးများအတွက်တွိဒ်နှင့်ဂျော့ချ်လမ်းကလပ်ဝတ်စုံများအတွက်အဝတ်အစားများ။
သီချင်း: Herre မှ hot - Nelly